यसकारण तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न: 25 कारणहरू
2018 मात्र सुरु भयो, जसको अर्थ छ कि सबैले अरुलाई आगामी वर्षको लागि लक्ष्य बनाउन सूची पाउनेछन्। र तपाईलाई थाहा छ किन धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि यस्तो कार्य सूची केहि पनि तर लामा छ?
हो, किनकि तिनीहरूले यस सूचीमा के हासिल गर्न हासिल गर्न सकेनन्। यस विफलताको कारण उद्देश्यपूर्णताको कमीमा छैन, केहि शानदार किस्मत, तर लक्ष्य निर्धारण को गलत कार्यान्वयनमा। स्थिति ठीक गर्न यो समय हो। यहाँ 25 कारणहरू छन् तपाईले मात्र बुझ्न पाउनुहुनेछ किन वर्षको योजनाहरूको सूचीको सूची पेपरमा रहन्छ, तर तपाईं सजिलै संग आफ्नो योजनाको कार्यान्वयनको साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
1. हामी सबै कुरा एकैचोटि धेरै चीज गर्दछौं।
अधिक प्लानरले तुरुन्तै ग्लोबल कुराको कार्यान्वयनमा सुझाव दिन्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईंले यो लक्ष्य हासिल गर्न चाँडै चाँडै शुरु गर्नुभयो, यो कुरा चाँडो बाहिर चाँडै फ्याँक्नुहोस्। आदर्श: हरेक दिन सानो गर्न, वांछनीय ठुलो छैन, इच्छित दिशामा कदमहरू। यो प्रक्रिया तुलना गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, केक खाएर। त्यसैले, या तपाईं बिस्तारै ठूलो टुक्रा बन्द गर्नुहुन्छ, स्वादिष्ट पेस्ट्रीको स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ, वा एक मिनेटमा तपाई सबै डेसर्ट मिस्सिस गर्नुहुन्छ र फलस्वरूप तपाईंले खुशी र सन्तुष्टि महसुस गर्नुहुन्न, तर पेटमा केवल भारी मात्रामा।
2. हामी चाँडै छाड्छौं।
चाँडै प्रेरणा टाढा सुरु हुन्छ, नोटबुकमा तुरुन्तै नज़र, जसमा वर्षको सुरुमा उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य विस्तारमा चित्रण गरे। उदाहरणका लागि, वर्षको अन्त्य सम्म तपाई एक नयाँ कार किन्न चाहानुहुन्छ, भरी सार्वजनिक यातायातमा ड्राइभिङको बारेमा बिर्सनुभयो। निस्सन्देह, बिना छुट्टै काम गर्न कठिन छ, ओभरटेक गर्न। कहिलेकाहीँ तपाईं त्याग्न चाहानुहुन्छ, तपाईले कमाएको पैसा लिनुहोस् र छुट्टीमा जानुहोस्। यस्तो क्षणमा, यो तपाईंको ग्लाइडरमा हेर्नको लागी आदर्श छ, यो विस्तृत हुनेछ, किन तपाईं यो पैसा चाहिन्छ, तपाईंले यो बचत गर्नुहुन्छ र तपाईंको जीवन कार को खरीद संग कसरी परिवर्तन हुनेछ।
3. हामी मात्र नकारात्मक पक्षमा ध्यान दिनेछौं।
उदाहरणका लागि, तपाईं गर्मीमा उज्यालो लाग्न उत्तम भौतिक रूपमा, एक जोडा पाउन्ड छोडेर। त्यसैले, तपाईंको जीवनलाई नकारात्मक कुराहरूबाट बचाउनुको लागि (यस अवस्थामा यो अधिक वजन छ), यो सकारात्मक पानाहरू थप्न महत्त्वपूर्ण छ (यो एक पाईलोन मा प्रशिक्षण नृत्य हुन सक्छ)।
4. हामीसँग सम्बन्धित पनि धेरै माग गर्दै छौं।
पहिला हामी आफैलाई कम प्यारी खाने को वादा गर्छौं। त्यसपछि हामी हाम्रो प्रेरणा गुमाउँदछौं, हाम्रो हात छोड्ने र अचानक, जब तपाईं यो नगरेमा, 23:00 मा तपाईं आफ्नो नेपोलियन प्लेटको साथ आफ्नो ल्यापटपमा बस्न सक्नुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, आफैलाई क्रोधित हुनुहोस्, र यसले केहि पनि राम्रो हुनेछ। आफैलाई केही चीजको सानो टुक्रा हानिकारक बनाउनुहोस् तर यति स्वादिष्ट। छोटो ब्रेक लिनुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस् कि तपाईं कम सुत्ने खाना किन चाहानुहुन्छ, यसले के दिन्छ, यसले यसले तपाईको जीवन कसरी परिवर्तन गर्नेछ। विश्वास गर्नुहोस्, भविष्यमा, शक्तिले तपाईंको लागि धन्यवाद दिन्छ।
5 हामी सबै थाहा छैन कि कसरी हाम्रो लक्ष्यहरू सही ढंगले बनाउँदछौं।
त्यहाँ "स्मार्ट लक्ष्य" (SMART लक्ष्य) को एक अवधारणा हो। यस वाक्यांश मा SMART एक संक्षिप्त नाम हो, को अनुसार निर्दिष्ट: विशिष्ट, मापदण्ड, प्राप्य योग्य, प्रासंगिक, समय-सीमा। छोटोमा: आफैलाई यथार्थवादी विशिष्ट लक्ष्यहरू सोध्नुहोस् जुन तपाईले केहि निश्चित समयमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
6. गलत सोच।
यदि तपाईं धूम्रपान छोड्ने योजना बनाउनुहुन्छ, तर घरमा वा काममा लगातार तनावको सामना गर्नुपर्दछ, त्यसपछि यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेछ। तपाइँ कुनै पनि परिवर्तन सुरु गर्नु अघि, आफ्नो जीवनमा नकारात्मक हटाउनुहोस्।
7. हाम्रो समय व्यवस्थापन गर्न हामी गलत छौं।
हामी सबै फरक छौं, तर किनभने के एक जीवनमा काम गर्दछ, अर्को व्यक्तिले मद्दत गर्न सक्दैन। तर, अन्तमा, हरेक मध्ये 24 घण्टा छ। यदि तपाई सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो बहुमूल्य समय समर्पित गर्नुहुन्छ भने, यो यसलाई टाई गर्नको लागि समय हो। सायद तपाइँ यसलाई भिडियो गेमहरूमा वा विषाक्त व्यक्तिसँग खाली वार्तालापहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ? तपाईंको समयका भक्तहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्।
हामी एक्लै छौं।
सबैभन्दा ठूलो भाग यो एक्लो गर्न हो। जो पनि तिमी मान्नु भएन, हवाई जस्तै मान्छे अरुसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छ। एउटै बाटोको साथ तपाईं सँगसँगै हिंड्ने कोहीको लागि हेर्नुहोस्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, दुईको लागि कुनै पनि कठिनाइहरूमाथि सजिलो छ।
9। वित्तीय बाधाहरू।
प्रायः हामी विश्वास गर्छौं कि वजन कम गर्न को लागी, महँगो हलमा हिंड्नु पर्छ। वास्तवमा, लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न धेरै कम तरिकाहरू छन्।
10 हामी अक्सर विचलित छौं।
यदि हामी वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भने, यो हाम्रो निरन्तरतालाई कत्तिको विचलित गर्न समाप्त गर्ने समय हो। यहाँ सबभन्दा कम प्राथमिकतामा आउँछ। महत्त्वपूर्ण सल्लाह: कुनै पनि चीज जसले लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दैन, यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, तपाईंलाई एक कदम फिर्ता पुर्याउँछ।
11. त्यहाँ कुनै स्पष्ट योजना योजना छैन।
जब तपाईं चाहानुहुन्छ भने हासिल गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्न एक महान प्रलोभन छ, सबैतिर आधा बाटो छोडेर। निराशाको समयमा सुरु भएको व्यवसायलाई बेवास्ता गर्नदेखि जोगिन योजना बनाउनको लागि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। एक राम्रो विचारधारा योजनाले तपाईंलाई सही कार्यहरू फेला पार्न अनुमति दिन्छ। अन्य शब्दहरूमा, जब योजना A काम गर्दैन, ब्याकअप सुरु गर्ने समय हो।
धेरै धेरै आकस्मिक योजनाहरू।
हो, यो हुन्छ र यस्तो। त्यहाँ छन् जो एक मात्र योजना छैन, तर त्यहाँ पनि कम्तिमा 10 जना व्यक्तिहरू छन्। यसले एक ठूलो संख्याको वैकल्पिक विकल्पहरू सिर्जना गर्दछ, हामी इच्छित तरीका प्राप्त गर्न सबै भन्दा सरल तरिकामा प्राथमिकता दिन्छौं।
13. कुनै पनि योजना बनाउन चाहँदैनन्।
अर्को कारण किन धेरै लक्ष्यहरू सपनामा रहन्छन्। यदि तपाईं योजनामा ​​जान्नुहुन्न भने, तपाईं असफल हुनेछौं। कागजी चरणहरूको पानामा तल लेख्नुहोस् जसले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ, यसलाई वास्तविकतामा बदल्नुहोस्। यो सबै कुरा विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण छ, SMART सिद्धान्त बिर्सनु हुँदैन (बिन्दु #5हेर्नुहोस्)।
14. हामी हाम्रो विफलतामा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं।
यदि तपाइँ गल्ती गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सही ट्रयाकमा हुनुहुन्छ। कहिल्यै असफल भएनका लागि समस्याहरू। यहाँ यो विन्स्टन चर्चिलका शब्दहरू सम्झन उपयुक्त छ: "सफलता असफलताको विफलता बिना असफलताबाट सार्न सक्ने क्षमता हो" र यसकारण तपाइँका बलहरूमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। गल्तीलाई उपयोगी जीवन अनुभवको रूपमा विचार गर्नुहोस्।
15. हामी अस्थिर छौं।
कसैले पनि रातभर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्दैन। के तपाईंलाई थाहा छ कति पटक थमस एडिसनले प्रकाश बल्बको आविष्कार गरे? होइन, दोस्रोबाट होइन र तेस्रोबाट होइन, तर हजारौबाट। यो सम्झनुहोस् र परेशान हुन चाँडो नगर्नुहोस् जब, हप्ता वा महिना पछि, तपाईं जुन चाहनु भएको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
16. हामी असफल हुन डराउँछौं।
निस्सन्देह, तपाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईं असफल हुनुहुन्न, तपाईं पूर्वनिरपेक्ष गर्तमा रहनु हुनेछैन। तर तपाईं मात्र सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, सफल हुन प्रयास गर्नुहोस्। वा तपाईं आफ्नो सबै जीवन एक स्थानमा बस्न चाहानुहुन्छ जीवनको बारेमा उजुरी र अझ राम्रो परिवर्तन गर्न प्रयास गर्ने?
17. हामी आफ्नो क्षमता कम गर्छौं।
तपाईं पनि सक्षम हुनुहुन्न कि तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ। मानव क्षमताहरू अनन्त छन्। सबै सीमाहरू हाम्रो टाउकोमा छन्। इच्छा र आत्मविश्वासको साथ मात्र, तपाईं सजिलै पहाड बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी आफैसँग पूर्णतया ईमानदार छैनौं।
कहिलेकाहीँ हामी के चाहदैनौँ, तर कुन समाजले हामीलाई निरीक्षण गर्दछ वा हामीलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूमा असर गर्छ। तपाईंका साँचो इच्छाहरू बुझ्न आफैँलाई हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। कसलाई थाहा छ, तर सायद तपाईंले निश्चित लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्न किनभने यो समाज द्वारा लगाईएको थियो? बुझ्नुहुन्छ के तपाई साँच्चै चाहनुहुन्छ?
1 9। एक कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
सामाजिक मनोवैज्ञानिकहरूले दोश्रो शक्तिलाई दोहोर्याउने सीमित नगर्ने सीमित स्रोत हो। यसलाई दाँया र बायाँ तिर स्प्रेक रोक्नुहोस्। यो एक कुरामा फोकस गर्ने समय हो।
20. हामी आफूलाई अरूलाई तुलना गर्दछौं।
सम्झनुहोस् कि तपाईसँग आफैलाई तुलना गर्न आवश्यक छ, यो विगतमा तपाईं संग छ। हामी सबै फरक छौं, हामी सबैसँग आफ्नै जीवन अनुभव छ र हामी सबैलाई वांछित प्राप्त गर्न को लागी, हामीले विभिन्न बाधाहरू हटाउनु पर्छ।
21. हामी आफैलाई मात्र खराब देख्छौं।
उसले चाहने हासिल गर्न सक्षम छैन जो एक व्यक्तिको रूपमा आफैलाई हेर्नुस्। सम्झनुहोस् कि तपाईंको विचारहरूले तपाईंको विश्वासहरूलाई असर गर्छ, जुन, बारीमा, उपयुक्त कार्यहरू उत्पन्न गर्दछ। दर्पण दृष्टिकोण। अब एक सफल मानिस तपाईलाई हेर्नुहुन्छ, जसको लागि समुद्र घुटिएको छ। नाकमा आफैलाई यसलाई काट्नुहोस्।
22. हामी दिनको लागि तालिका बनाउँछौँ।
प्रायश्चितताले तपाइँको दिन नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यो लक्ष्य को उपलब्धि मा क्रूर मजाक खेलेंगे। अहिले, पेन र कागजको पाना लिनुहोस्। भोलिको लागि एक्शनको अनुमानित योजना बनाउनुहोस्।
23. हामी कुनै भन्न सक्दैनौं।
म यहाँ धेरै कुरा गर्न चाहन्न। केवल एक कुरा नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए, प्रायः मानिसहरूले "होइन, माफ गर्नुहोस्, तर आज होइन", अरू भन्दा बढी सफल छन्।
24. हामी जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौँ।
परिवर्तन सुरु हुन्छ र हामीसँग हाम्रो कार्यहरू, विचारहरू समाप्त गर्दछ। मौसमको लागि समुद्री बाट प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। केवल तपाईं आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो दु: खको कुरा सुन्नु हुँदैन, तर सारा संसारले तपाईंलाई कस्तो दुखी बनाउँदैन। आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न को लागि तपाईंको सबै भन्दा राम्रो छ। अरूलाई प्रेरणाको लागी नबिर्सनुहोस्। आफ्नै जीवनको जिम्मेवारी लिनुहोस्।
25. हामी परिणाममा धेरै ध्यान केन्द्रित छौं।
तपाईं जो हासिल गर्न को लागी अधिक ध्यान केन्द्रित, कठिन लक्ष्य को लागि आफ्नो यात्रा हुनेछ। हरेक सानो सफलता, हरेक, बेर अज्ञात, विजयको आनन्द लिनुहोस्। तपाईं थाहा छैन कि तपाईं चाहेको चाँडै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
45 डिजाइनर संवर्धन वयस्कों र बच्चाहरु को मानसिकता को नष्ट गर्न मा सक्षम!
35 प्रमाणहरू कि केटीहरूको हातमा, समेत सबै भन्दा क्रूर कारहरु स्त्री बनाइनेछ!
खुसीको प्रेरणा: 35 टावरमा वास्तविक मानिसहरूको छुटेको परिवर्तन!
सबैको साथ हुन सक्छ - 14 मजाकिया गलत दुश्मन
एम्बुलेंस को डाक्टरहरु द्वारा 25 भयानक कथाहरु लाई भन्यो
सबै जिन्दगी भन्दा धेरै जीवित: महान नोकिया 3310 फिर्ता छ!
महिलाहरु किन हस्तमैथुन गर्नु पर्ने 12 कारणहरु
आधुनिक वान गगको रचनात्मक चित्रहरू
27 सावधानी कि जीवन लाखौं गुणा बढी हुन सक्छ
हामी सबै बचपनबाट आउँदछौ, वा 10, 20 र 60 वर्ष पछि कसरी फर्किने?
अनुवादको कठिनाइहरू, वा गुगलको साथ मंगोलियन कसरी बोल्ने?
20 तथ्यहरू थकित व्यक्तिहरूलाई बुझ्न योग्य छन्
25 सामाजिक सञ्जालबाट chudikov, जुन हामीलाई हाम्रो तस्विरको साथ आश्चर्य नगर्ने!
सही बोल्नुहोस्! शीर्ष बोल्ने 12 गल्तीहरू जो बोल्छन्
लिनन शैली - सबैभन्दा फैशनेबल साँझ र दैनिक तस्बिरहरू
एलर्जी rhinitis - लक्षणहरू
सेतो स्कर्ट - सबै अवसरका लागि सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल
स्कार्फ लुईस विटटिन्सन - कसरी नकलीबाट मूल लुई Vuitton शल भेद गर्न?
खिलौनेको भित्ता आफ्नै हातले
वसन्तमा स्ट्राबेरीलाई खुवाउने - कस्ता उर्वरकहरूले धनी फसल उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने?
पनीर र सागको साथ पाई
Duodenal डुडोनेइटिस - लक्षणहरू
परिवारले जयडन स्मिथलाई ईएमए पर्यावरण पुरस्कारमा समर्थन गरे
हुआ हिन, थाईल्याण्ड
हिलेरी डफ आधिकारिक रूपमा आफ्नो क्यान्सर जेसन वाल्शलाई पुष्टि गरे
बुखार बिना चिसो पिउन के हो?
रेडियोटेलफोनका लागि संचालकहरू
वजन घटाने को लागि प्याज आहार - मेनू र व्यंजनहरु
बच्चाहरु को लागि शुद्ध गाजर
पर्देको साथ जेनिंग कोठा
सराजेवो मा चिडियाघर
थैला-ब्रेककेस - व्यापार महिलाहरूको लागि उत्तम मोडेल
बेनेडिक्ट कम्बरबच मिनीसरी "मेल्रोस" उनको सपनाको नायकमा खेल्नेछ
क्या बोलोरो लगाउन को लागी?
सब्जको साथ जुचिन र आइपुग्नेहरू